Sun City ngokwezingane
I-Sun City eNingizimu Afrika
I-Sun City Resort ikulungele imindeni enezingane. Amaqembu amazinyane amakhulu, izindawo zokudlala, ezemidlalo, imidlalo ye-Arcade, ama-movie, ama-wildlife amahle ahlangana nazo, kanye nokuzijabulisa okungapheli esigodini sase-Waves ne-Waterworld.Isikhungo Sozokuzijabulisa sisenhliziyweni yeSun City, futhi yilapho izivakashi zingakwazi ukubhuka imisebenzi eminingi ngokusebenzisa ideskithophu yokukwazisa esiteshini. Imisebenzi yangaphandle ye-adventure nemidlalo ingahle ibhaliswe kudeskithophu ye-Gametrackers. Isikhungo Sokuzijabulisa siqukethe umnotho wokuzijabulisa ngendlela yama-arcade imidlalo.
Abazali bangaqiniseka ukuthi izingane zabo zizogcinwa zijabulisa eSan City Resort. Kunezinkampani ezimbili ezitholakalayo - enye engaphansi kweminyaka engu-12 kanti enye enye yezingu-13. Isevisi yokuqeqeshwa ngokuzithandela nokuxoshwa yenziwa ngeThula Baba, ngakho-ke umama nobaba bangajabulela isidlo sothando, i-show show, nokuningi okuningi.
Kukhona imisebenzi eminingi esekelwe amanzi e-Sun City Resort. I-Valley of the Waves engenye yezindawo eziphambili kakhulu emaphakathini emiphakathini emhlabeni ikhona eLost City. Kukhona namachibi amaningi ahlakazekile kulo lonke i-Sun City Resort Complex, konke okuye kwaqeqesha abagibeli bezilwane esandleni. Eduzane nezingane ezisolwandle zingathola indawo yokudlala emnandi, nge-mini-golfu, izimoto ezincane, ama-trampolines nokuningi. Izingane ezindala nezindala zingakujabulela ukuhamba nge-zip-slide e-2km (1.2 miles) noma uhambo lokuhamba ngehhashi.
Abancane bayothanda ukukwazi ukufuya izilwane zasepulazini e-Animal World futhi bajabule ekutholeni izinhlobo ezahlukene eziMfuleni Zezinyoni Zokuqothulwa (isikhathi sokudla nsuku zonke ekuseni). Izingane eSun City Resort nazo zingakujabulela ukugibela isitimela se-steam esibheka kulesi sikhungo.
I-Thula Baba -insizakalo yokufundela izingane kanye nokuzikhethela. Le sevisi isebenza emini nasebusuku.
I-Kamp Kwena Crèche -.lesi sakhiwo sivulelekile izingane ezineminyaka engu-0 - 12 futhi unikeza imisebenzi ehlukahlukene yansuku zonke. I-Crèche ivulekile nsuku zonke.
I-Kamp Kwena Fort -indawo enhle yezinkulungwane ezingu-13 ukwenza abangane abasha! Iqembu livulekele ku-4 -12 ubudala ubudala abanama-18 angaphezu kuka-18 futhi akukho utshwala. I-Club Chirp isebenza nsuku zonke emaholide esikoleni nasebusuku ngoLwesihlanu nangeMgqibelo
Amaphuzu avelele wezingane
I-Valley of Waves e-Lost City isici esimangalisayo ngempela. Uhambo oluya kule ndawo yemilingo luqala ngokuhamba phezu kweBridge of Time ehambisana nokusebenza kwe-volcanic njalo ihora. Izindlela zokuzijabulisa, izivande ezinhle ezinemihume efihlekile, amahlathi kanye nebhuloho eligobhozayo elizungeze isigodi.
I-Roaring Lagoon iyi-pool emangalisa yamanzi okulinganisa amamitha ayizi-6 500 square (amamitha ayisigidi angu-7560) anesigodi esihle esinezintambo. Amagagasi amakhulu akhiqizwa njalo ngemizuzwana engu-90. Ipaki yamanzi inemikhumbi emihlanu ehamba phambili yamanzi, kuhlanganise neThempeli Eliqinekile, lapho izivakashi ziphonsa khona amamitha angu-17 (57 ubude) phansi komgwaqo omude ngaphambi kokuba zisuswe ngaphansi kwebhuloho futhi zibe echibini ekupheleni kwesilayidi. Kukhona futhi ukugibela i-tube namaslayidi omzimba.
Umphakathi wendawo uhlinzeka ngesidlo sokudla, esitolo se-sweetie, esitolo sokugqoka, indawo yokudlala yezingane kanye nedamu. I-Royal Bath enye enye echibini elikhulu lokubhukuda eliseduze ne-amphitheater.
Isigodi samagagasi - I-Lost City
Indawo yamanzi - ukuhamba, ukugibela ukugibela njll echibini phambi kweCabanas
Amachibi okubhukuda (nabalondolozi bokuphepha) izingane kanye nabantu abadala - wonke amahhotela
Izikebhe zamabhomu - eduze kwechibi phambi kweCabana
I-Butterfly World - e-Cultural Village, ukungena eSun City
Izwe lezilwane - izilwane zasemapulazini / izinyoni zenyamazane eCabanas
Ukugibela ihhashi - Ipaki Yezemidlalo yangasese eseduzane
Uhambo - eduze nezinkantolo ze-Cascades tennis
I-Valley of the Waves, I-Waterworld kanye namanzi okubhukuda
Umshini wokugibela uSegway - eduze nezinkantolo ze-tennis eKascades
I-Zipslide - bhuku ngokusebenzisa i-Welcome Desk
Ukuhamba ngesitimela se-steam sika-Scenic - iCabana
Abagcini Bokuthola (ingcebo yokumba) - lakeshore eCabana
I-Trampolines nebala lokudlala ngokugcwele - echibini lolwandle eCabanas
I-mini-igalofu nezimoto ezincane-olwandle olwandle eCacanas
Kamp Kwena Crèche, oneminyaka engu-0-12 - Isikhungo sokuzijabulisa, izinga eliphezulu
I-Kamp Kwena Fort, eneminyaka engu-4 kuya kweyishumi nambili - ngesikhathi seminyaka eyisisindo nabo babamba izenzakalo zentsha kusihlwa
I-Moviezone - ama-movie womndeni esikhungweni se-cinema - Isikhungo Sozokuzijabulisa
Imidlalo Yezinkampani zemilingo, kubantwana bazo zonke ubudala - Isikhungo Sozokuzijabulisa